Radio Asal 88.6 MHz – Jowhar _ Soomaaliya » Barakacayaasha Jowhar Oo Ka Cabanaya Dhibicda Roobka.
Barakacayaasha Jowhar Oo Ka Cabanaya Dhibicda Roobka.
Magaalada Jowhar Ee Xarunta Dowlad Goboledka HirShabelle waxaa Saacadihii ugu dambeyay ka da’aya roob wata dhaxan daran kaasi oo saameyn kula duwan ku yeeshay qoysaska barakacayaasha eek u dhaqan xeryaha Barakac ee gudaha magaalada jowhar.
Qaar ka mid ah qoysaskani oo la hadlay Radio Heals ayaa waxa ay sheegen in guryaha ay degan yihiin aanay aheyn kuwo awooda in ay kaga badbaadan roobka iyo dhaxanta kuwaasi oo ka sameysan maryo jilicsan iyo jwaano awodna uma laha in ay ka difaacaan dhibicda roobka.
Hooyooyinka qaar ee Barakacayaasha ah Ee aan kula kulanay gudaha warshada isnaay ee magaalada jowhar ayaa ka codsaday maamulka degmada jowhar iyo guud ahaan masuuliyiinta Maamulka HirShabelle in ay gurmadyo Baca ah ay la soo gaaraan si ay kaga badbaadan xaaladaha la xiriira roobka.
Si kastaba xiliyada roobka ayaa waxaa qeylo dhaan la xiriirta helida daryeel dhanka nolosha ay uu ka soo yeeraa Qoysaska Barakacayaasha ah ee deegaansanaya dhismaha Burburay ee warshadii sonkonta isnaay ee magaalada jowhar waxaan yar jawaabaha ay ka helaan deeq bixiyayaasha Caalamka sababo kala duwan oo jira awgeed.